नयाँ क्रिकेट बोर्डलाई कसरी चुस्त बनाउने, पूर्व सिइओ भावनाको बुझाई | Neplays.com
नयाँ क्रिकेट बोर्डलाई कसरी चुस्त बनाउने, पूर्व सिइओ भावनाको बुझाई
By Neplays	 Last updated Oct 17, 2019
नेपाली क्रिकेटले करीव साढे तीन बर्षपछि जुन मौकाको पर्खाइमा थियो, त्यो यतिबेला पुरा हुने क्रममा छ । आइसीसीले नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बन फुकुवाका लागि केहि सर्तराख्दै फेरी आइसीसी सदस्यमा फिर्ता ल्याएको छ । तर आइसीसीले नेपाल क्रिकेट संघको नयाँ नेतृत्वका अगाडी केहि सर्तहरु राखेको छ, जसलाई नयाँ कार्यसमितीले इमान्दार रुपमा पालना नगर्नुको विकल्प छैन ।
आइसीसीले नेपालसँग राखेका सर्त र आगामी दिनमा कसरी क्रिकेटको विकाश र विस्तार गर्दा यो निलम्बन चाँडो भन्दा चाँडो पुर्ण रुपमा फुकुवा होला भन्ने विषयमा हामीले क्यानकी पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेसँग जान्ने कोशिष गरेका छौ, साथै उनलाई के गरेमा क्रिकेट संघले राम्रोसँग काम गर्न सक्ला भनेर पनि सोधेका छौ । हेरौ भावनासँग क्रिकेटका बारेमा सोधिएका ३ प्रश्न:
करिब साढे तीन वर्ष आसिसिले क्यानलाई निलम्बनमा राख्यो । तर अहिले फुकुवा हुने क्रममा छ । सर्तहरु राखेको छ । विशेष गरि आर्थिक पाटाहरुमा आइसीसीको सर्तहरु छन् । कतिको सजिलो छ त तपाईको नजरमा ?
चुनाैती त खासै छ जस्तो मलाई लाग्दैन । खाली पहिलोे जुन हाम्रो सिस्टम थियो, त्यो फिट एण्ड फाइन थिएन , के गर्ने कसाे गर्ने प्रष्ट थिएन् । म्यानेजमेन्टमा त खासै केही थिएन । अहिले निस्पक्ष रुपमा चुनाव भएर नयाँ कार्यसमिति आएको छ , अब उहाँहरुको कार्यशैलीबाट र निर्णयबाट नै मात्र एकीन हुन्छ की अब नेपालमा क्रिकेटको भविश्य के हुन्छ भनेर । मलाई लाग्दैन कि गाह्रो छ भनेर तर गाह्रो कहाँनिर हुन्छ भन्दा आफुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न चाहि अलिकति चुनाैती होला । अहिलेको सबै भन्दा ठुलो समस्या चाँहि सबै सम्वन्धित व्यक्तिलाई सँगै मिलाएर लग्न पनि अलि गाह्रो छ ।
यसका साथसाथै भताभुंग भएको क्यानको संरचनालाई पुन स्थापित गर्न अप्ठेरो होला । पुन स्थापित भएपछिपनि ४ वर्ष अघिको जस्तो २-४ जना कर्मचारी राखेर टेस्ट प्लेइंग नेशनकाे सपना राख्न चाँही अहिलेको परिस्थितीमा नसुहाउँलाकी मेरो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा । एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट टिम हुनुपर्यो, कम्तिमा ८-९ जना, कति हुन्छ राम्रो टिम बनाउनु पर्यो । राम्रो र सक्षम मान्छे राख्नु पर्यो, भर्ती केन्द्र बन्नु भएन् । त्यसले केही रिजल्ट दिने वाला छैन् ।
त्यो टिम बनेपछि आफ्नो कार्यकालमा एउटा लक्ष्य लिनु पर्यो कि अवको ४ वर्षमा यसरी जाउँ र यहाँसम्म पुगौ भन्ने । टिमको हिसावले हेर्ने हो भने २०२३ सम्म खेल्नुछ, एक दिवशिय मान्यतालाई कायम राख्ने भन्ने छ। त्यस्तै बोर्ड आइसकेको छ अब भन्नु पर्यो कि आगामी ४ वर्ष हामीले यो यो गर्छौ र नेपाली क्रिकेटलाई यो उचाईसम्म पुर्याउछौँ भनेर आफ्नो आगामी रोडम्याप सबैलाई बुझाउन सक्नु पर्यो ।
बोर्डले गरेको हरेक निर्णय अनुसारको आउटकम निकाल्न चाहिँ अलि गाह्रो छ । यति गरेपछि सिस्टम आफै बस्दै जान्छ । सबै सम्वन्धित व्यक्तिलाई थाहा हुनु पर्यो कि आज हामी कहानेर छौँ र अबको ४ वर्षका हामी लिएको गन्तब्यमा कसरी पुग्ने भन्ने रोडम्याप सहित सबैलाई बुझाउन सक्नु मख्य चुनौती हो । सिस्टम त आफै बस्दै जान्छ त्यसका केही छैन्। ट्रान्सप्यारेन्सीको समस्या पहिलेको जस्तो छैन् । अहिले सबै स्वचालित जस्तो छ । आर्थिक पाटो सबै बैकिङ प्रणालीबाट गर्नुस, कहाँ, कति, कुन जिल्ला, प्रदेशमा गएको फण्ड बैकिङ प्रणलीबाट गर्दा पारर्दशिता देखिन्छ । सबै आईटी बेसमा गर्दा पारर्दशिताका कुनै समस्या देखिदैन ।
अहिले मैले देखेको सबै भन्दा ठुलो समस्या भनेको क्रिकेटसँग सम्वन्धित जस्तै खेलाडी, सरकार आसिसि सबैको मन जित्नु देखेको छु । उनीहरुलाई बोलेरमात्र हुदैन व्यवहारका पनि लागु गरेर देखाउनु पर्यो। यो नै ठुलो समस्या मलाइ लाग्दछ । उनीहरुलाई आफ्नो क्लियर भिजन देखाएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । ६-७ महिनामा सबै ठिक भइसक्छ । यदी ठिकै छ पहिलाकै संरचनाबाटै अघि बढ्ने हो भने चाहिँ अलि समय लिन्छ ।
क्यानलाई सस्पेन्स गर्नुको मुख्य कारण पनि आर्थिक पाटो नै हो। समयमा आर्थिक प्रतिवेदन पठाउन नसक्दा ठुलो रकम जरिवाना पनि तिरेको थियो। त्यही टिम अहिले फेरि निर्वाचित भएर आएको छ । फेरि त्यही क्रम नदोहोरिला भन्ने पनि त छैन नि?
होइन, गल्ती बाट नै सिक्ने हो । त्यसपछि त्यही कुराबाट सिकेर अघि बढ्दा नै सफलता हात पार्ने हो । अब उहाँहरुले सिक्नु भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ । त्यति बेला फाइन्यास म्यानेजर भन्ने कोहीँ थिएन, खाली एकाउण्टेण्ट हुनुहुन्थ्यो, सबै आफुलाई मन लागी चलाइरहनु भएको थियो । त्यसपछि म आएसँगै फाइन्यास म्यानेजर पनि आउनुभयो र हामीले पहिलो वर्षको अडिट बुझाएपछि केही त्यस्तो समस्या थिएन् । समस्या आउनु भन्दा पहिलाको अडिटमा केही समस्या थियो । अब नयाँ सिराबाट सुरु गर्न उहाँहरुलाई सजिलो पनि होला । नयाँ सुरु गर्न पहिलाको झमेला पनि हुन्न । खाली पहिलाको अडिट पुरा गर्ने हो एक दुइटा कुरा मिलाएपछि त्यो अडिट प्रमाणित हुन्छ होला । त्यसपछि नयाँ सिराबाट सुरु हुन्छ केही गाह्रो छैन्।
जति सर्त आइसिसिले राखेको छ । यो नयाँ कार्यसमितिप्रति त्यति विश्वस्त हुन नसकेको भएर हो?
होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन, यो त सस्पेन्सन हुनु अगाडिकै स्थितिमा हो । अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको अन्तरिम प्लान बनाउने भन्ने हो । अन्तरिम प्लान भनेको नै व्यवस्थापनलाई पुन स्थापित गर्ने र आर्थिक पाटालाई कसरी पारदर्शि बनारने भनेर एउटा रोडम्याप दिन्छ होला । त्यो भनेको क्यानलाई पनि सजिलो पाटो जस्तो लाग्छ मलाई । क्यान त्यही बाटोमा अघि बढ्यो भने सहि ट्रयाकमा आएपछि आइसिसिले पुर्णरुपका फुकुवा गर्छ। सधैं हेरिरहन पनि सम्भव हुन्न र हामीलाई पनि आइसिसिले सधैँ हेरेको पनि चहादैनौँ । अब भनेको आइसिसिले दिएको गाइडलाइनलाई फलो गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो चाडो भन्दा गर्यौ भने सर्तहरुपनि हटाउछ। यदी हामी सुध्रिएनौ भने फेरि त्यही हो ।